amazon prime video yave kuwanikwa pane android tv uye chromecast
Kuru Nhau & Ongororo Amazon Prime Vhidhiyo yave kuwanikwa pane Android TV uye Chromecast
Amazon Prime Vhidhiyo yave kuwanikwa pane Android TV uye Chromecast
Amazon neGoogle vakaviga hatchet nguva pfupi yadarika, saka mazhinji masevhisi avo akatanga kuratidza kune mumwe nemumwe & apos; s chikuva. Kutanga kwesvondo rino, Amazon yakaziviswa kuti iyo yepamutemo YouTube app ichave ichiwanikwa pane Fire TV zvishandiso, neGoogle yakasimbiswa Amazon Prime Vhidhiyo ikozvino paApple TV uye Chromecast.
Kutanga nhasi, Amazon Prime Vhidhiyo ichave inowanikwa kuburikidza neChromecast uye Android TV zvishandiso. Google yakazivisa kuti vashandisi vakavakirwa muChromecast neChromecast vanokwanisa kuwana zvinopfuura zviuru zviviri zvemaapp uye kuti vachakwanisa kukanda zvirimo kubva kuAmazon Prime Vhidhiyo app kuenda kuTV yavo.
Zvinhu chete zvinodiwa ndezvazvino Amazon Prime Vhidhiyo app uye Android 5.0 kana yakakwira kana iOS 10.1 kana nyowani pafoni kana piritsi kuti igamuchire iyo yekuvandudza. Vashandisi veChromecast Ultra, kune rimwe divi, vanozowana mukana wemazita zviuru mazana mana akaisirwa Prime pasina muripo wekuwedzera.
Chekupedzisira, iyo Mountain View kambani yakasimbisa kuti kunze kwekusarudza madhivhizheni eApple TV ane Parizvino Vhidhiyo, mamwe maTV TV akangwara, akagadzika-kumusoro mabhokisi uye ekushambadzira madhizaini munguva pfupi ichawana iyo app sezvo kuburitsa kwatotanga.
Ramba uchifunga kuti iyo nyowani Amazon Prime Vhidhiyo app inowanikwa kuti utorwe kuburikidza Google Play Chitoro , asi kana iyo icon ikaratidza pane yako Android TV, unogona kungozvinyora pairi kutanga kurodha pasi.
maitiro ekubhura mu twrp kupora
Mheni EarPods uye 3.5mm adapta inouya ne iPhone 7, isina waya AirPods uye Beats ichawedzera
Ndeipi iyo Galaxy S8 vhezheni vhezheni iwe yaungasarudza?
Waizviziva here kuti & maapos; akanyarara 'mameseji anogona kushandiswa kuteedzera kwauri kuenda?